Matt Harchick - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Blackmagic ဒီဇိုင်းကနေအသစ် HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR ကိုလာမယ့်မျိုးဆက်ထုတ်လွှင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် application များအတွက်ပြီးပြည့်စုံမျိုးစုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ ဘက်စုံများအတွက်ဒီဇိုင်း, အ HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR တစ်ကလစ်ကစားသမားက ISO cam အသံဖမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်မာစတာစံချိန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ Analog စသွင်းအားစုဖြစ်ဟောင်းကိုဗီဒီယိုတိပ်ခွေအဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ...
SPROCKIT, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှိနေခြင်းမီဒီယာအတွက်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစျေးကွက်-သက်သေထွန်းသစ်ကုမ္ပဏီများအဆက်သွယ်ပြုလုပ်မယ့်, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာသည်၎င်း၏တော်လှန်ရေးကုမ္ပဏီများမှစုပေါင်းပြီးနောက် $ 2019 သန်းအပါအဝင်ထက်ပို $ 1 ဘီလီယံအထိကြီးပြင်းခဲ့ကြကြောင်း, ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့သူ: အ 500 #NABShow မှာ SPROCKIT လာရောက်ပူးပေါင်း။ SPROCKIT featured ပါလိမ့်မည်သည့် startup ကုမ္ပဏီများသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်ရေးထုတ်ဖော်ပြအဖြစ်ဤသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မှတ်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည် ...
အဆိုပါ 2019 #NABShow: ရရှိနိုင်သောယခု! Adobe က Adobe က Creative Cloud စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဆက်ဆက်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေလတံ့သောဗွီဒီယိုနဲ့အသံ tools တွေကိုအသစ်တီထွင်မှုများကြေညာခဲ့သည်။ Adobe က Creative Cloud အဆိုပါ, Clemency, Fox ကအားကစား, San Francisco မှာနောက်ဆုံးက Black က Man အပါအဝင်ရုပ်ရှင်, တီဗီ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် streaming များစီမံကိန်းများကိုတစ်ကျယ်ပြန့်, ဇာတိသားတော်ကိုမှဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေးထား ...
ဧပြီလ 2019th-6th ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သော 11 #NABShow, ဖန်တီးသောသူပညာရှင်များအဘို့အကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်ပါသည်, စီမံခန့်ခွဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးဖျော်ဖြေရေးဖြန့်ဝေခြင်း, ကျော်ကြားကို Creative မာစတာစီးရီး hosting အဖြစ်တစ်ပင်မအဆင့် session တစ်ခုပါလိမ့်မည် နဲ့ content ဖန်တီးသူများအတွက်အထူးအစီအစဉ်များ။ အဆိုပါ reinventing ဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်နည်းစနစ်သို့သီးသန့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ sharing ...
Plura အသံလွှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းမှဖြေရှင်းချက်အခြိနျဇယားများအတွက်လူသိများသည်။ ယခုနှစ်တွင် Plura Las Vegas မှာအဆိုပါ 2019 NAB Show မှာအချို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထုတ်ကုန်ပြပါလိမ့်မည် ... ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောနယူးထုတ်ကုန် lineup: မီးတောက် +: မီးတောက် + Lawo Group ကအစပျိုးခဲ့ကွောငျးပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမီးတောက် + ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
သငျသညျ Self-ကားမောင်းကားတွေ, စက်ရုပ်ကားများ, ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်မောင်း-လျော့နည်းကားများကသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းရှိမရှိကဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် sensing မော်တော်ကားမရှိ, လူ့ input ကိုအနည်းငယ်သာနှင့်အတူကားမောင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများပြီးမြောက်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြုပြင်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောဝင်တိုက်ခြင်း၏လျော့ချရေးနှင့်အတူဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်နေကြသည်။ အဆိုပါအဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်စနစ်များ senors အမျိုးမျိုးသုံးပြီးရေကြောင်းသွားလာမှုလမ်းကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ် ...
အဆိုပါအဆင့်မြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်များကော်မတီ (ATSC) ATSC 1,000 ၏အဓိကဗားရှင်းအကြမ်းဖျင်း 20 စံချိန်စံညွှန်းများပါဝင်သောစာရွက်စာတမ်းများ၏ 3.0 စာမျက်နှာများကိုကျော်ထုတ်လုပ်ပါပြီ။ ကျွန်တော်သိသည်အတိုင်း, ATSC 3.0 ၏ပထမဦးဆုံးများထားရှိသည့် 2017 ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်တောင်ကိုရီးယား (မေ 2018) တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤတွင်အဆိုပါစတိတ်တွင်, ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကို C ပျက်ကွက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ခွင့်ပြုစည်းမျဉ်းကိုအတည်ပြု ...
အဆိုပါအီလက်ထရောနစ်အားကစားအတွေ့အကြုံကိုငွေရှာခြင်းအတွက်မဟာဗျူဟာများအတွက်နက်ရှိုင်းသောရေငုပ်တစ်စင်းအားကမ္ဘာအနှံ့ကြီးထွားလာသောဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ 2019 များအတွက်ကြည့်ရှုမှုများ၏ခန့်မှန်းတိုးတက်မှုနှုန်း 427 သန်းရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်။ အစီရင်ခံစာများဧပြီလ 2017 ထဲမှာ, ဂိမ်းစျေးကွက်၏ 42% မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများကစျေးကွက် 50% ထက်ပိုမိုတောင်းဆိုဖို့စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ...
တိုင်းပြည်အနှံ့အချို့သောမြို့ကြီးများမြင့်မားသောဒေတာနှုန်းဝါကြွားတတ်ထားတဲ့ 5th မျိုးဆက်ဆယ်လူလာဝန်ဆောင်မှုအောင်းနေချိန်အတွင်းလျှော့ချရေး, စွမ်းအင်ချွေတာ, ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး, ပိုမိုမြင့်မားသည့်စနစ်စွမ်းရည်များနှင့်ဧရာမစက်ကိုဆက်သွယ်မှုကြုံနေရပါပြီ။ ဖြန့်ချိ-5 ပြီးစီးအတွက် 15G သတ်မှတ်ချက်များများ၏ခန့်မှန်းခြေပထမအဆင့် 2019G ဟာနေ့စဉ်ဆယ်လူလာများအတွက်စံအောင်အစောပိုင်းစီးပွားဖြစ်ဖြန့်ကျက်လိုက်လျောညီထွေတံ့သောဧပြီလ5ဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ...
2019 #NABShow: Artificial Intelligence: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချို့သောအနာဂတ်အခုတော့ပစ္စုပ္ပန် Is
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ Artificial Intelligence အစိတ်အပိုင်းမရှိတော့အနာဂတ်အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်မှု၏စိတ်နှလုံးထဲသို့အလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ AI အပေါ့ပ်သီချင်းတွေကိုဖန်တီးရေးနိုငျသညျ, ကကြေကွဲတဲ့သတင်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, ဘက်မလိုက်သတ္တုများပုံသွန်း၏အဖြစ်မှန်အစီအစဉ်များစုဝေး, ရုပ်မြင်သံကြား programming ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြံစည်မှုလိုင်းဖန်တီးဖို့ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုရှိကြသည်တွင်သောအမြန်နှုန်း ...
Lawo BVE2019 မှာဗိုလ်မှူးကုန်ပစ္စည်းကြေညာချက်များလွှတ်တင်!
Lawo, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်, စတူဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေအနုပညာများအတွက်ရှေ့ဆောင်အိုင်ပီကွန်ယက်ထိန်းချုပ်မှု, အသံနှင့်ဗီဒီယိုနည်းပညာကိုဂျာမန်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံ IP ကိုဖြေရှင်းချက်အစုစုကိုမှဖြည့်စွက်, IP ကိုထုတ်လွှင့်ထုတ်ကုန်များအခြားအဓိကလွှတ်ပေးရန်ပလက်ဖောင်းအဖြစ် 2019 BVE ပြပွဲရွေးချယ်တော်မူပြီ ။ အသစ်ထုတ်ကုန်ဝေးလံခေါင်ဖျားထုတ်လုပ်မှု setup ကိုဧည့်သည်များသို့ရောနှောနေခြင်း BVE အပေါ်တွေ့ကြုံခံစားရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည် ...
အဆိုပါအသံလွှင့်ပညာရေးအစည်းအရုံးပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနစီမံကိန်းများအပေါ်အာရုံစိုက်ကြောင်းမီဒီယာအနုပညာတစ်ဦးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုလေ့ကျင့်ရေးဓာတ်ခွဲခန်းများလက်ခံရရှိရန်ရောနှောပညာတတ်များနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ, ရွက်ပေါက်ကျောင်းသားများအားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကွံဉာဏျ (ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်) ဖြစ်ပါသည်ကြောင့် Westgate Las Vegas မှ Resort ကိုမှာ 6th မှဧပြီလ 9th ကနေအရပျကိုကြာပါတယ်။ #NABShow 2019, ဒီနှင့် တွဲဖက်. အလုပ်လုပ် ...
အဆိုပါ Las Vegas မှ SuperMeet စျေးပြိုင်အဆိုပြုလွှာ Farewell
စပ်လျဉ်း, ကွန်ယက်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရွယ်တူချင်းအတူအနည်းငယ်ကော့တေးနှင့်ပါတီများခံစား၏ 18 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးအထင်ကြီးပြေးပြီးနောက်နှစ်ပတ်လည် Las Vegas မှ SuperMeet တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ SuperMeet Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်အသိုင်းအဝုိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းသင်ယူဖို့မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုကွန်ယက်နှင့်ရှယ်ယာဖို့အခွင့်အလမ်းပေး ...
Robert De Niro (လိုအပ်ငါကပိုလို့ပြော) NAB Show ကို New York မြို့မှာ 2018 Show ကိုဖွင့်လှစ်နာမည်ကြီး headliner လိမ့်မည်။ de Niro (များ၏ရှေ့မှောက်၌နှင့်ကင်မရာနောက်ကွယ်မှနှစ်ဦးစလုံး) ကိုထုတ်လုပ်မှုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ဦးဒဏ္ဍာရီလုံးဝဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံသည်သူ၏ဆယ်စုနှစ် solidifies ဖြစ်ပါတယ်။ de Niro ရဲ့ fireside ချက်တင် Editor- နောက်ဆုံးဟောလိဝုဒ်အထောက်အကူပြု Dade ဟေးယက်စသဖြင့်တည်းဖြတ်ပါလိမ့်မည် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 2212345	»	1020...နောက်ဆုံး»